समाचार - कसरी एक फाउन्डेशन ब्रश कुनै ब्रश अंक प्रयोग गर्न?
कसरी एक फाउन्डेशन ब्रश कुनै ब्रश अंक प्रयोग गर्न?
1. यो एक तरल आधार छनौट गर्न सबै भन्दा राम्रो छ।
यद्यपि फाउन्डेशन ब्रश फाउन्डेसन ब्रश गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ, नींव को सबै बनावट सही फाउन्डेशन ब्रश गर्न सक्दैन। यदि तपाइँ फाउन्डेशन ब्रश अंक बाट बच्न चाहानुहुन्छ, तब यो एक तरल आधार छनौट गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो छ।
तरल आधार धेरै लचीला छ, यो एक फाउन्डेशन ब्रश संग समान रूप मा ब्रश फैलाउन को लागी सजीलो छ, र यो सजिलै संग छाला संग जोडिएको पछि ब्रश अंक छोड्ने छैन, र जग धेरै समान, पातलो र चिकनी हुनेछ।
2. फाउन्डेसन ब्रश को लागी केहि रखरखाव गर्नुहोस्।
भर्खरै किनेको फाउन्डेसन ब्रश खोल्नुहोस्, र त्यसपछि टिन पन्नी को एक टुक्रा मा केहि अप्रयुक्त तरल आधार डाल्नुहोस्, तरल फाउन्डेसनको साथ फाउन्डेशन ब्रश भिजाउनुहोस्, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि प्रत्येक ब्रिस्टल फाउन्डेसन संग कभर गरीएको छ, र त्यसपछि यसलाई एक प्लास्टिक झोला मा लपेट्नुहोस् वा प्लास्टिक र्याप ब्रश टाउको बाँध्नुहोस् र यसलाई केहि मिनेट को लागी एक बन्द स्थिति मा राख्नुहोस्, तब फाउन्डेसन ब्रश बाहिर निकाल्नुहोस्, फाउन्डेसन सिधै कुल्ला वा कागज तौलिया को उपयोग ब्रश टाउको सफा गर्न को लागी फाउन्डेशन सफा गर्नुहोस्, ताकि ब्रश टाउको नरम र बलियो हुनेछ। ब्रश चिन्ह देखाउन को लागी यति सजिलो छैन।
३. आधार संग अनुहार मा धेरै "丨" ब्रश।
एक तरल फाउन्डेसन लिन र तपाइँको अनुहार मा लागू गर्न को लागी सीधै एक फाउन्डेशन ब्रश को उपयोग नगर्नुहोस्। यसको सट्टा, तपाइँको हातको हत्केला वा निवासको ठाउँमा फाउन्डेशनको सिक्का निचोड्नुहोस् (यदि तपाइँ सुख्खा महसुस गर्नुहुन्छ, लोशनको एक थोपा जोड्नुहोस् र यसलाई समान रूपमा मिलाउनुहोस्), र त्यसपछि फाउन्डेसन ब्रश को एक सानो रकम लिन को लागी प्रयोग गर्नुहोस्। तरल फाउन्डेसन तब अनुहार मा सानो "丨" अंक को एक संख्या कोर्नुहोस्, र त्यसपछि फाउन्डेसन ब्रश को उपयोग बिस्तारै यसलाई अगाडि र पछाडि झाडू। यो मात्र ब्रश अंक छोड्न बाट बच्न, तर पनि मोटाई मा फाउन्डेशन ब्रश वर्दी बनाउन।
4. फाउन्डेशन ब्रश को तीव्रता मा ध्यान दिनुहोस्।
तपाइँले देख्न सक्नुहुन्छ कि फाउन्डेशन ब्रश प्रायः सिंथेटिक फाइबर बाट बनेको हुन्छ, त्यसैले ब्रश टाउको को ब्रिस्टल कठिन हुन सक्छ। तपाइँ यो शक्ति को उपयोग गर्दा मास्टर को उपयोग गर्नु पर्छ। सामान्यतया, यो0शक्ति संग स्वाइप गर्न को लागी उचित छ, र हात खरानी बाट बच्न को लागी धेरै भारी हुनु हुँदैन। छाला वा फाउन्डेशन को मोटाई असमान छ, तर बल धेरै सानो हुनु हुँदैन, जो सजीलै फाउन्डेशन ब्रश मा अवशिष्ट ब्रश को लागी नेतृत्व गर्दछ।
5. विभिन्न भागहरु को ब्रश विधि मास्टर।
जब एक गाँठ, ठुलो, वा एक आधार ब्रश संग माथी को रूप मा ठूला क्षेत्रहरु ब्रश, यो एक राम्रो टाउको फाउन्डेशन ब्रश छनौट र छाला संग एक 30 डिग्री कोण कायम राख्न को लागी राम्रो छ। जब नाक, आँखा क्षेत्र वा ओठ ब्रश, यो एक सानो एक संग बदल्नुहोस्। सपाट/तिरछा फाउन्डेशन ब्रश आँखा क्षेत्र र अनुहार को सूक्ष्म क्षेत्रहरु ब्रश गर्न को लागी डिजाइन गरीएको छ, र त्यसपछि ब्रश खडा र बिस्तारै यो फेरि ब्रश। यस तरीकाले, ब्रश अंक केहि सूक्ष्म वा झुर्रिएको भागहरु मा देखा पर्न सजिलो छैन।
6. सफाई को एक राम्रो काम गर्नुहोस्।
प्रयोग पछि, तपाइँ एक पेशेवर मेकअप हटाउने को उपयोग गर्न को लागी फाउन्डेशन ब्रश सफा गर्न को लागी अर्को उपयोग को सुविधा को लागी, र अर्को पटक तपाइँ यसलाई प्रयोग गर्न को लागी, त्यहाँ असमान ब्रश टाउको को कारण कुनै ब्रश अंक हुनेछ।
7. फाउन्डेसन ब्रश गरे पछि, पानी स्प्रे र अनुहार थिच्नुहोस्।
फाउन्डेसन लागू गरिसकेपछि, हथेली वा स्पंज गीला गर्न को लागी मॉइस्चराइजिंग पानी को उपयोग गर्नुहोस्, र तब बिस्तारै फाउन्डेशन मेकअप फेरि थिच्नुहोस्। यो न केवल सुख्खा छाला moisturize, तर पनि फाउन्डेशन ब्रश को कारण ब्रश को निशान हटाउन, मेकअप सतह क्लीनर र अधिक सफा छोडेर। राम्रो अनुपातमा।
यी कसरी ब्रश अंक बिना फाउन्डेशन ब्रश को उपयोग गर्न को लागी सुझावहरु छन्। यदि तपाइँलाई लाग्छ कि फाउन्डेशन मेकअप पाउडर पफ संग असमान छ, तपाइँ राम्रो संग फाउन्डेशन ब्रश को प्रभाव को कोशिश गर्न सक्नुहुन्छ। यो अधिक अभ्यास संग शुरू गर्न को लागी सजिलो छ।
मेकअप ब्रश, मेकअप ब्रश उपकरण, नाई शेभ, ब्रश मेकअप सेट गर्नुहोस्, सेभिंग सेट, मेकअप ब्रश सेट,